काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थशास्त्रीहरुले प्रतिपादन गरेका सबै सिद्धान्त लागु गर्ने पर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र संकटमा पर्न थालेपछि गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । सोमबार आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिको सुझाव संकलनका क्रममा राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घाटउन सरकारलाई सुझाव पेश गरेको छ । आयल निगमको घाटा अत्यधिक बढ्दै गएपछि सरकारलाई विभिन्न सुझावहरु पेश गरेको हो । नेपाल आयल निगमले घाटा चुलिएर थेग्नै नसक्ने अवस्था भएको भन्दै प्रधानमन्त्री र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको ध्यानकर्षणसहित १० बुँदे सुझाव पनि
काठमाडौं । हिमालयन हाइड्रोपावर लिमिटेडको आईपीओमा अन्तिम दिनसम्म १० गुणा आवेदन परेको छ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडका अनुसार अन्तिम दिनसम्म १६ लाख ३ हजार ९७५ जना आवेदकले १ करोड ७९ लाख ७ हजार ९४० कित्ताका लागि १ अर्ब ७९ करोड ७ लाख ९४
२४ वाणिज्य बैंक, ९ विकास बैंक र ११ फाइनान्सको ३९ करोड कित्ता बोनस शेयर नेप्सेमा सूचीकृत
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा हालसम्म सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बोनस शेयर सूचीकृत भइसकेको छ । हाल नेप्सेमा सूचीकृत भएका वाणिज्य बैंकहरु मध्ये २४ वटा वाणिज्य बैंक, विकास बैंकहरु मध्ये ९९ वटा बैंक र ११ वटा फाइनान्स कम्पनीको बोनस शेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । वाणिज्य बैंक,
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थशास्त्रीहरुले प्रतिपादन गरेका सबै सिद्धान्त लागु गर्ने पर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र संकटमा पर्न थालेपछि गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । सोमबार आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिको सुझाव संकलनका क्रममा राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । पछिल्लो […]
हिमालयन हाइड्रोपावरको आईपीओ भाग्यमानी २ जनाले ११ कित्ता पाउने, १०…
आइएमई पे र स्मार्ट क्यू आरवीच साझेदारी, बीगमार्टमा क्यूआर मार्फत…
विद्युतीय गाडीमा टाटा, नेटाभी र कियालाई फाइदा पुग्ने गरी बजेट…
४ अर्ब ३४ करोड माथिको कारोबार हुदाँ यी कम्पनीको भयो…
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थशास्त्रीहरुले प्रतिपादन गरेका सबै सिद्धान्त लागु गर्ने पर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र संकटमा पर्न थालेपछि गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । सोमबार आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिको सुझाव संकलनका क्रममा राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको
कामना सेवा विकास बैंक र खबर एक्सप्रेस
आँधिखोला लघुवित्तको संचालकमा बुद्धिसागर त्रिपाठी नियुक्त
नबिल बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकको एकिकृत
सेयर बजार घट्ने एउटै कुराले मात्रै हैन । मेरो वाणिज्य बैंकको पहिलो इनिङ सक्सेस भयो । कहिले पनि पूरा दरबन्दी राखेर काम गर्न पाइन्न । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई अरू कुनै बैंकले जित्नै सक्दैन विभिन्न आस्थाका ट्रेड युनियनलाई मैले कहिल्यै विभेद गरिनँ । सबैभन्दा सस्तो कर्जा भएको नै हाम्रै बैंक हो । अरू बैंक गाभिएर ठूला बनेका
काठमाडौं । सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेड म्युचुअल फण्ड निष्काशन गर्न
मौद्रिक नीतिबारे छलफल गर्न एनबीएको बैठक पोखरामा,
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकको सीईओहरुको संगठन नेपाल बैंकर्स एशोसियनको बैठक
जेठसम्म जीवन बीमा कम्पनीको बीमाशुल्क १.१९ खर्ब
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा जीवन बीमा कम्पनीहरुले
प्राइम लाइफमा अबैध डीसीईओ, बीमा क्षेत्रको अनुभव
काठमाडौं । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका वरिष्ठ नायब प्रमुख
काठमाडौं । रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले विशेष साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । सभा असार २० गते सोमबारका दिन साधारण सभाका अध्यक्ष ताराचन्द केडियाले साधारण सभाको अध्यक्षता ग्रहण गरीे छलफलका प्रस्तावहरु प्रस्तुत गरेका थिए । सो सभाले कम्पनीको अधिकृत पूँजी बृद्धि गर्ने, कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा पूँजी बृद्धि एवंं अन्य व्यबस्थाहरु समेत
दुई कम्पनीको १३ लाख कित्ता शेयर लिलामीमा,
सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सको साधारण सभा सोमबार बस्दै,
आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स र ग्यालेक्सी स्पेशलिटी क्लिनिकबिच
सेयर बजार घट्ने एउटै कुराले मात्रै हैन । मेरो वाणिज्य बैंकको पहिलो इनिङ सक्सेस भयो । कहिले पनि पूरा दरबन्दी राखेर काम गर्न पाइन्न । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई अरू कुनै बैंकले जित्नै सक्दैन विभिन्न आस्थाका ट्रेड युनियनलाई मैले कहिल्यै विभेद
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य गगनकुमार थापाले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग प्रतिक्रिया दिँदै महामन्त्री थापाले अर्थमन्त्रीमाथि संसद भित्र र बाहिर प्रश्न उठेकाले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन् । अर्थमन्त्रीले स्वेच्छाले राजीनामा नदिए प्रधानमन्त्रीले हटाएर तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने पनि थापाले बताए । ‘अहिले अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज जम्मा १३ दिनको छ भनेर भनिसके पछाडि मलाई के लाग्छ भने तत्काल प्रधानमन्त्रीले यसका बारेमा एउटा एक्सनमा जानुपर्छ । यत्रो विषय संसदमा उठ्यो । बाहिर उठ्यो । हो, होइन मलाई थाहा छैन । तर यो विषय उठिसकेपछि मैले बुझेको कि अर्थमन्त्रीजीले
पेट्रोलियम पदार्थ आयात ठप्प हुन सक्ने निगमको
विद्युतीय गाडीमा टाटा, नेटाभी र कियालाई फाइदा
ओलीको प्रश्न सीसीटीभी फुटेज कसरी डिलिट भयो
जसपाले आफ्ना मन्त्री फिर्ता बोलायो, नयाँ मन्त्रीको
एक जनाले गल्ति गर्दैमा सय जनालाई कारवाही
‘पूँजी वृद्धिमा बीमा समितिलाई नटेरेको होइन, बीमा प्राधिकरण आएपछि पूँजी…
सामुदायिक लघुवित्तले माग्यो ठूलो संख्यामा कर्मचारी, एसइई उत्तिर्णलाई समेत अवसर
छिमेक लघुवित्तले माग्यो सहायक अधिकृत, शैक्षिक योग्यता कति ?
सातै प्रदेशका लागि माग्यो आइएमई लाइफले ६७ जना ब्रान्च म्यानेजर, शैक्षिक योग्यता कति ?
मोरङ व्यापारी संघ र उद्योग संगठन मोरङले बाढी पीडितहरु राहत सामाग्री हस्तान्तरण
सिमेन्ट र डण्डी विदेश निर्यात गर्ने उद्योगलाई ८ प्रतिसत निर्यात…
काठमाडौं । सरकारले निर्यात गर्ने उद्योगलाई सहुलियत दिने बजेटमा उल्लेख
काठमाडौं । विगतमा एलियन्स वा यूएफओ ९उडन तश्तरी० को सम्बन्धमा
नेपालकै ठूलो ‘भवन किर्ती रत्न‘ पुरस्कार महावीर पुन तथा राष्ट्रिय…
काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ र बीबी फाउन्डेसनको संयुक्त
काठमाडौं । चीनमा १३२ जना सवार रहेको चाइना ईस्टर्न एअरलाइन्सको
नेपाल सरकारद्वारा २ वटा जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि २५.९२ अर्ब…
तपाइको गोजिमा कति छ ? १० हजारमै इलेक्ट्रिक स्कुटर दिने…
साङ्गे विद्युतको विशेष साधारण सभा असार ३० गते, यस्ता छन् एजेण्डा
अप्पर सोलु हाइड्रोको आईपीओ आजदेखि बिक्री खुला, क-कसले आवेदन दिन पाउँछन् ?
श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्सका संचालकको कार्यकाल थप
समृद्धि फाइनान्सको १० हजार कित्ता शेयर बिक्रीमा
समृद्धि फाइनान्सको हकप्रद शेयर बाँडफाँट
आदर्श लघुवित्तको शेयर रजिष्ट्रारमा बिओके क्यापिटल मार्केट नियुक्त
काठमाडौं । योग्य र अनुभवी व्यवस्थापन अभ्यासकर्तालाई एउटै छातामुनि ल्याउने काममा संलग्न फ्रक्सजब कलेज ग्राजुएटसम्म पुग्ने र उनीहरुलाई करिअरको सही बाटोसँग जोड्नेतर्फ अघि बढेको छ
बिजबजारको भारी छुट सहितको ‘२० मा बिज’ अभियानमा सपिङ गरी…
काठमाडौं । नेपाली बजारमा दाहुवाको अधिकारीक आयातकर्ता तथा बिक्रेता कम्पनी बिध म्यानेजमेन्टले नयाँ
काठमाडौं । गणपति बनस्पति प्रा.लि. द्धारा उत्पादत गरी बिक्री बितरण गर्दै आइरहेको रामदेव
काठमाडौं । भिभो, ग्लोबल स्मार्टफोन ब्रान्डले सबैभन्दा प्रख्यात अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता फिफा विश्वकप
काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा सुधारका विविध विषयमा केन्द्रित पुस्तक ‘पढाइका कुरा’ सार्वजनिक भएको छ । वी रिडले प्रकाशन गरेको पुस्तकमा नेपालको शैक्षणिक प्रणाली
‘आइसिटी अवार्ड २०२२’ को ११ विधामा नोमिनेशनका लागि अनलाइन आवेदन…